Remmina inoita kuti iwe uedze mazana maviri eLinux masisitimu kuburikidza neremote desktop | Linux Vakapindwa muropa
SeLinux blogger, ndinofanira kuyedza akawanda masisitimu anoshanda muhupenyu hwangu hwezuva nezuva. Izvo ini zvandinowanzoita kurodha pasi ISO yeiyo system iri mubvunzo uye ndogadzira Live USB kana kuvhura iyo ISO muVirtualbox, zvinoenderana nezvandinoda. Asi ko kana usiri kuda kurodha chero chinhu? Ko kana tiri vashandisi vasina ruzivo? Muzviitiko izvi tinogona kushandisa Remmina, iri kure desktop desktop iyo inoiswa ne default muUbuntu.
Mubvunzo unenge uri: sei? Simply nekuwana kero uye chiteshi kubva kune DistroTest.net webhusaiti. Panguva yekunyora, ino webhusaiti inotibvumidza kuyedza 628 shanduro dze 219 dzakasiyana masisitimu anoshanda. Tinogona kuyedza masisitimu kushandisa desktop iri kure, zvinoreva kuti mashandiro acho haazove akanaka sekuda kwatingaita asi, hei, tichazviedza tisina chekuisa chero chinhu uye tisingave nyanzvi. Pano tinotsanangura zvaunofanira kuita.
Kuedza DistroTest system muRemmina
Remmina inouya yakaiswa nekusarudzika muUbuntu. Ndakaedza Ubuntu Budgie uye inoshanda pasina kumisikidza chero chinhu. Matanho ekutevera angave anotevera:
Kana tisina Remmina yakaiswa, tinoiisa. Iri mune software centre yemazhinji maLinux anoshanda masystem, akadai seUbuntu (kunyangwe yakatove kuiswa muUbuntu). Sezvandichatsanangura gare gare, ungangoda Remmina chaizvo.
Ngatiendei pawebhu DistroTest.net.
Isu tinosarudza iyo system yatinoda nekudzvanya pazita rayo.
Tinodzvanya pa «Kutanga».
Tinomirira. Zvichienderana nehurongwa hwekushanda, mutsetse unogona kuve wevashandisi vakati wandei kana chete 1. Tinofanira kumirira kuti nguva yedu isvike (haiwanzo kutora nguva). Zvichienderana nesisitimu, ivo vachatibvumidza 2-3 maawa ekureba kuti tibatanidzwe.
Kana nguva yedu yasvika, tinoteedzera iyo nhamba inowanikwa mu «Server».
Isu tinovhura Remmina.
Isu tinotambanudza hwindo uye tinoshandura kuVNC.
Mubhokisi bhokisi riri padyo naro, tinonamira iyo nhamba (kana kero) yatakanyora mudanho 6.
Isu tinowedzera chiteshi kumashure. Kuve 4 manhamba, ini ndinosarudza kuisa iyo colon uye iyo port nhamba neruoko. Inofanira kutaridzika senge xx.xx.xx.xx: yyyy.
Tinodzvanya Enter uye zvingave zvirizvo. Tinogona (asi isu tinofanirwa) kukudza hwindo kuitira kuti zvese zvioneke.
Kune mamwe masisitimu asingashande, asi angangoita kwenguva pfupi. Iniwo ndinofanira kutaura izvozvo izvi zvinoshanda mune mamwe mapurogiramu ari kure edesktop, seKRDC kubva Kubuntu. Muchokwadi, iyo musoro wekutora unobva kuKRDC. Maitiro acho akafanana zvakafanana. Imwe sarudzo ndeyekuzviita zvakananga kubva kubhurawuza, asi zvinowanzo kutadza zvakanyanya. Ini ndinokusiya uine vhidhiyo kuti iwe ugone kuona kuti zvese zvinoshanda sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Remmina inokutendera iwe kuyedza anopfuura mazana maviri eLinux masisitimu kuburikidza neiyo kure desktop
Ini ndinofunga onworks.net zvirinani kumhanya chero chinhu kubva kuLinux online. wakambozviedza here?